एनसेलको पिआरबिटी सेवामा नयाँ योजना
२०७६ असोज ६ सोमबार, काठमाडौं। एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पिआरबिटी) को रुपमा राख्न र अरुलाई सो धुन प्रयोग गर्न आवहान गर्न सक्नेछन्। साथै धुन बनाउने ग्राहकले आफ्नो धुनलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरी प्रत्येक हप्ता आकर्षक पुरस्कार जित्न सक्नेछन्। ... बाँकी अंश»
फेसबुकद्वारा दशौँ हजार एप्स निलम्बन
२०७६ असोज ४ शनिबार, मेन्लो पार्क, अमेरिका। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरिदिएको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
पन्ध्र वर्षपछि नयाँ ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति’
२०७६ असोज १ बुधबार, काठमाडौं । सरकारले सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको छ । ... बाँकी अंश»
एनसेलले ल्यायो आकर्षक ‘मेरो प्लान’
२०७६ असोज १ बुधबार, काठमाडौं। एनसेलका ग्राहकले अब कुनै पनि समय बिना कुनै झन्झट एनसेलको आकर्षक डेटा सेवाको मजा लिन सक्नेछन्। एनसेल प्रालिले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्र्तत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस सेवाबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। ... बाँकी अंश»
ओपो एनाइन २०२० का यस्ता छन् फिचर
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, ओपो एनाइन २०२० मा उपलब्धगरिएको ४८एमपी अल्ट्रा-वाइड-एंगल क्वाड क्यामेराले हरेक किसिमका शुटिङ एंगल र परिस्थितीमा प्रयोगकर्ताका आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता राख्छन् । यसको क्यामेराले अल्ट्रा नाइट मोड २.०, अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी र आर्टिस्टिक पोट्रेट स्टाइलको पूर्ण रेञ्जसपोर्ट गर्छ । त्यसैगरी, यसमा रहेको १६एमपी फ्रण्ट क्यामेराले प्रयोगकर्तालाई ट्रेण्ड तथातिनका ईच्छा अनुसार परिमार्जनमा सघाउन एआई ब्यूटिफिकेसन प्रविधिको पनिप्रयोग गर्छ । ... बाँकी अंश»
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । ... बाँकी अंश»
सुबिसुको दशैं अफर : ९९ रुपैयाँ मै इन्टरनेट वा क्लियर टिभि
२०७६ भदौ २९ आइतबार, काठमाडौं । सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लिले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंलाई मध्यनजर गर्दै मात्र रु. ९९ मा इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । आउदै गरेको महान चाडलाई उपभोक्ताहरुले हर्षोउल्हासका साथ मनाउनका साथै इन्टरनेटको माध्यम बाट सर्भशुलभ मूल्यमा एकआपसमा खुसी साट्न पाउन भन्ने उद्देश्यले न्युनतम मूल्यमा यो सेवा बजारमा ल्याएको हो । ... बाँकी अंश»
विज्ञान प्रबिधिको प्रयोगमा जोड
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ,पूर्व उद्योग मन्त्री ,गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीले विज्ञान प्रबिधिको प्रयोगमा जोड दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
एनसेलको करछली सदन देखि सडकसम्म उठाउँछौं : राप्रपा
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, काठमाडौं। एनसेल करछलीको बिषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज पदाधिकारी बैठकमा विस्तृत छलफल गरेको छ। नेपालको सवै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणका बिषयमा पार्टीले पूर्वगृह एवं कानूनमन्त्री निरञ्जन थापालाई विस्तृत अध्ययन गरी बैठकमा प्रस्तुति गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। ... बाँकी अंश»
फ्रान्सले फेसबुकको क्रिप्टोकरेन्सी 'लिब्रा' माथि प्रतिबन्ध लगाउने
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, पेरिस। फ्रान्सले फेसबुक कम्पनीले जारी गर्न लागेको लिब्रा नामको क्रिप्टोकरेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) लाई युरोपमै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। यस मुद्राका कारण युरोपेली सरकारहरुको “मुद्रा सम्प्रभूता” संकटमा पर्ने खतरा रहने भन्दै फ्रान्सले उक्त चेतावनी दिएको हो। ... बाँकी अंश»
क्यान सुनसरीमा बाँस्तोला, सबैलाई समेटेर अघि बढने दाबी
२०७६ भदौ २६ बिहिबार, ईटहरी । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) सुनसरीको दुई दिनअघि सम्पन्न निर्बाचनपछि धरानलाई समेत समेटेर अघि बढने नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिशाल बास्तोलाले बताएका छन । ... बाँकी अंश»
शाओमीको ४८ एमपी ट्रीपल क्यामेरा र ३२ एमपी सेल्फी क्यामेरा भएको मोवाइल सार्वजनिक
२०७६ भदौ २४ मंगलबार, एमआई ए३ मा एमआई ए सिरिजको भन्दा डिजाइनमा केहि परिवर्तन गरिएको छ । यस सेगमेन्टकै उत्कृष्ट फोन मी ए२ को कार्यात्मक पक्षलाई कायम राखेर मी ए३ मा नयाँ डिजाइन समावेश गरिएको छ । रु २३९९९ शुरुवाती मुल्य रहेको यस फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रेगन ६६५ चिपसेट, एएमओएलइडी सुपर डिसप्ले, ४०३० एमएएच ब्याट्री, ४८ एमपी ट्रीपल क्यामेरा सेटअप र इन–स्क्रिन फिङगरप्रिन्ट स्क्यानर जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । सबै एमआई ए सिरिज स्मार्टफोन जस्तै मी ए३ गुगल एन्ड्रोइड वान प्रोजेक्टद्वारा संचालित हुन्छ र यसमा एन्ड्रोइड ९ पाई पनि छ । ... बाँकी अंश»
अलिबाबाको अध्यक्षबाट ज्याक माले दिए राजिनामा
२०७६ भदौ २४ मंगलबार, बेइजिङ। विश्वकै सर्वाधिक ठूलो इ–कमर्श कम्पनी अलिबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माले कम्प्नीको अध्यक्षको पदबाट मंगलबार राजिनामा दिएका छन्। अमेरिका–चीन करयुद्धका कारण व्यवसाय नै संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा संस्थापक ज्याकले एकाएक राजिनामा दिएका हुन्। ... बाँकी अंश»
ए सिरिज २०२० सार्वजनिक गर्दै ओपो, यस्ता छन् बिशेषता
२०७६ भदौ २३ सोमबार, विगत १० बर्षदेखि ओपो ओभरसिज बजारहरुमा सक्रिय छ । ओपो ए सिरिजलाई वैश्विक बजारमा उपभोक्ताहरुले अत्यधिक रुचाएका पनि छन् । सन् २००९मा पहिलो ए सिरज मोडल, ए१०० थाइल्याण्डमा सार्वजनिक गरिएदेखि नै यसको डिजाइन, फोटोग्राफी र ब्याट्री प्रविधिका लागि अतुलनिय मौखिक लोकप्रियताका साथमा रुचाइएको छ । ... बाँकी अंश»
वर्ल्डलिंकको दशै र तिहार अफर
२०७६ भदौ २२ आइतबार, काठमाडौं। नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै र तिहारको उपलक्ष्यमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनस् लिमिटेडले नयाँ र आर्कषक अफर ल्याएको छ। यस अफर अन्तर्गत ... बाँकी अंश»
चन्द्रयान २ को चन्द्रमाको सतहमा पुग्नुअघि नै टुट्यो सम्पर्क, मोदीले बढाए हौसला
२०७६ भदौ २१ शनिबार, काठमाडौं । भारतले अन्तरिक्षमा इतिहास राख्नु अघि नै सम्पर्क टुटेको छ । इतिहास रच्नु केही समयअगाडि मात्र चन्द्रयान २ को ल्यान्डर विक्रमको ल्यान्डिङ भन्दा ६९ सेकेन्ड पहिले नै पृथ्वीसंग सम्पर्क टुटेको छ । ... बाँकी अंश»
बिटक्वाइन प्रयोग नगर्न बुरुन्डीको केन्द्रीय बैंकको चेतावनी
२०७६ भदौ १७ मंगलबार, बुजुम्बुरा। मध्य अफ्रिकी मुलुक बुरुन्डीको केन्द्रीय बैंकले नागरिकलाई भर्चुअल मुद्रा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। बैंकले यस्तो मुद्राको कारोबार अवैध हुने जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
फाइभ–जीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य योगदान गर्ने चीनको भनाई
२०७६ भदौ १५ आइतबार, साङ्घाई। सन् २०२० देखि २०२५ सम्ममा चीनको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ फाइभ–जी प्रबिधिका कारण निकै वृद्धि गर्ने प्राविधिक विज्ञहरूले शनिबार बताएका छन्। उनीहरूले आगामी पाँच बर्षमा डिजिटल प्रविधि क्षेत्रको आम्दानीमा २० खर्ब दश अर्बले अमेरिकी डलर वृद्धि हुने बताएका हुन्। ... बाँकी अंश»
सिईओ कै ह्याण्डल ह्याक हुन्छ भने कस्को ट्विटर ह्याण्डल सुरक्षित होला !
२०७६ भदौ १४ शनिबार, एजेन्सी। ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्याक डोर्सीको ट्विटर ह्याण्डल ह्याक भएको छ। उनको ट्विटर ह्याण्डल करब २० मिनेट ह्याकरहहरुको हातमा रहेको थियो। उनको ह्याण्डलबाट उक्त समयमा ह्याकरहरुले नश्लिय र आपत्तिजनक ट्विटहरु गरेका थिए। ... बाँकी अंश»
ह्याप्पी फादर्स डे ‘बुवा’
२०७६ भदौ १२ बिहिबार, काठमाडौं। एनसेल प्रा.लि.ले आयोजना गरेको एनसेल सर्ट फिल्म कम्पिटिसन अन्तर्गत कमल सुवेदी र उनको समुहले बनाएको ‘बुवा’ फिल्मले पहिलो पुरस्कार पाउन सफल भएको छ। यो प्रतियोगिता थिम बुवा रहेको थियो। ... बाँकी अंश»